Etu ị ga - esi nweta ahịa akpaaka maka ọrụ gị | Martech Zone
Enwere ọtụtụ ọgba aghara na ntanetị n'ịntanetị taa na ihe kpọmkwem akpaaka ahịa bụ. Ọ dị ka ụlọ ọrụ ọ bụla na-ahụ etu esi zipụ ozi email dabere na ihe kpatara ya na-akpọ onwe ha akụrụngwa ahịa. Anyị amụtala site na onye na-akwado ngwa ahịa ahịa anyị, Right Na mmekọrịta, na e nwere njirimara dị iche iche nke usoro akpaaka ahịa nke onye ọ bụla na-ere ahịa kwesịrị ịchọ:
data - ikike ịnakọta data, ma site na mpempe akwụkwọ, ma ọ bụ site na ijikọ ndị ahịa na ọdụ data gbasara ahịa. Nke a na - enyere ụlọ ọrụ aka ịkekọrịta nkwukọrịta ha nke ọma na igwe mmadụ, nkwenye, ịzụta akụkọ ihe mere eme na data ndị ọzọ dị oke mkpa.
isi - nanị ịkpalite ihe omume abụghị akpaaka, mana ikike ịlele ọtụtụ mmekọrịta nke onye ndu ma ọ bụ onye ahịa yana ịzụlite ihe nrịba ama nke ahụ na - eme ka ndị ahịa na - etinye ndụ ndị ahịa ya bụ otu ị si enweta ozi ziri ezi nye onye nnabata kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị.
Ntapu na ịkpalite Izi ozi - Mgbe ụfọdụ, ịkpalite email, dị ka ọ dị n’ihe banyere ụgbọ ahịa ịzụ ahịa hapụrụ ọrụ, na-arụ ọrụ nke ọma. Mana oge ndị ọzọ ịkwesịrị ịgafe ozi bara uru nke na-agwa gị atụmanya gị ruo mgbe ha dị njikere ime ihe ma ọ bụ zụta. Drip ahịa dị oke egwu, na-eweta ozi na nnata mgbe ha chọrọ ma ọ bụ chọọ ya.
Njikọ mmekọrịta - ndị ahịa na ndị ndu na-emekọrịta ihe site na mgbasa ozi site na mgbasa ozi mmekọrịta, ọ bụghị naanị na saịtị ha ma ọ bụ site na ibe ọdịda. Ngwongwo akụrụngwa gị na-ere ahịa kwesịrị inwe ike ịlele mmetụta nke isi ihe ndị ahụ.
O doro anya na njirimara ndị ọbịa, ibe ọdịda, ozi email na ahịa mkpanaka, njirimara onye ọrụ dị mfe niile bụ atụmatụ dị ukwuu nke usoro akpaaka ahịa. Họrọ amamihe gị na akpaaka na-ere ahịa. Anyị na-ele ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-azụta atụmatụ bara ụba nke ha na-anaghị eme - mana kwụọ ụgwọ. Anyị na-elele ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-agbasi mbọ ike ịghọta nloghachi na azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa ha n'ihi na sistemụ pere mpe. Ọtụtụ nyiwe akpaaka na-ere ahịa na-ejedebe na nnweta, yana ezughị ezu na-elekwasị anya na njigide na mmepe nke ndị ahịa.
Maka ngalaba azụmaahịa na-achọ inweta uru asọmpi, ngwa ọrụ azụmaahịa na-enye ohere dị egwu. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ ndị na-etinye ego na ngwa ngwa akụrụngwa ahịa na-ahụkarị 15 pasent na ọrụ okike ha. Ọbụna nke ka mma, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-amalite ịghọta nloghachi na ntinye ego ha ozugbo - pasent 44 na-achọpụta ROI n'ime ọnwa isii, na pasent 75 na-ahụ ROI n'ime otu afọ. Iji mee ihe a niile, ọ dị mkpa ka ị nweta ndị ziri ezi nọ ebe.
a Info automation infographic site na Adecco nwere nnukwu ndakpọ nke elele na omume kacha mma iji tinye ngwa ahịa akpaaka iji rụọ ọrụ.
Tags: adeccoahịa datadataihe ngosiemail ọpụpụahịa mkpọpu ahịankọwapụtaokpokorondu akaraakụrụngwa ahịanri na mmekọrịtaakarankewakpaliri emailtriggered eziga